Ma inaan bedelnaa ereyga "Geomatics"? - Geofumadas
Ma inaan bedelnaa ereyga "Geomatics"?
Disember, 2017 Geospatial - GIS
Iyadoo la tixraacayo natiijooyinka sahamin dhowaan la sameeyay, oo ay sameeyeen Guddiga Kooxda Aqoonyahannada Geomatics (GPGB) ee RICS, Brian Coutts wuxuu raadraacayaa isbeddelka erayga "Geomatics" wuxuuna ku doodayaa in la gaadhay waqtigii la tixgelin lahaa beddel
Ereygan wuxuu dib u soo ceshay madaxiisa "fool xumo". Gudiga Kooxda Xirfadlayaasha Geomatikiska (GPGB) ee RICS, sidaan horeyba u sheegnay, waxay dhowaan sameeyeen daraasad ku saabsan adeegsiga ereyga 'Geomatics' si loo sharraxo waxa ay ahaan jireen, hay'addiisa, Topography iyo Division Hydrography Division (LHSD) . Gordon Johnston, Madaxweynaha machadka kor ku xusan, wuxuu dhowaan sheegay in "jawaabo aan ku filneyn la helay si aan horay ugu sii wadno arrinta." Sidaa darteed, waxay umuuqataa, ugu yaraan qaar, inay wali jirto heer ah antipathy-ga nooca loo adeegsan karo isbadal. Joomatik wuxuu ahaa eray muran badan dhaliyay tan iyo markii la soo saaray 1998, waana uu sii jiray sidaas.
Jon Maynard sheegay in 1998,% ee Qaybta Land iyo Hydrography kaliya 13 codeeyay hindisaha magaca u Kuliyada Geomatics beddelo, iyo in 13%, 113 taageeray soo jeedinta iyo 93 soo horjeeda . Haddii aan nadiifinno lambarradaas waxay raacaysaa, wakhtigaas, waxaa jiray xubno ka tirsan 1585 ee LHSD. Tirooyinka la bixiyay waxay 7,1% xubnaha ka dhigayaan kuwa raalli gelin iyo 5,9% ka soo horjeeda, taas oo ah, marxaladda 1,2% wadarta wadarta guud! Waxaa cad in aan waxa laga yaabaa in aad soo wacdo cod weyn, mana xilkiisa ka mid ah isbedelka, gaar ahaan markii la tixgelinayo in% 87 ma muujiyaan ra'yi.
Xaggee ayuu ereyga "Geomatics" ka yimid?
Badanaa waxaa loo qaadan karaa in ereygu uu ka yimid Kanada oo uu si xawli ah ugu faafo Australia ka dibna Ingiriiska. Doodihii ka dhashay, gudaha Boqortooyada Ingiriiska, isbedelka la soo jeediyey ee ku saabsan magacyada koorsooyinka topography-ga ee jaamacadaha iyo qaybta RICS si loogu daro ereyga cusub, waxay noqotay mid laga doodo wakhtigaas, iyo Waxay xiiso galineysaa aqrinta lagusoo bandhigayo wixii ka dambeeyay dunida sawirka. Wicitaankii Stephen Booth ee "... dalacsiin ka badan kan loo yaqaan 'Geomatics' micnaheedu waa ..." waxay umuuqataa inuu bilaawday 2011.
Iyada oo ay jirto caddayn rasmi ahayn in Geomatics ereyga waxaa loo isticmaali jiray muddo sanado ah sida ugu 1960, waxaa guud ahaan la aqbalay in ereyga (geomatique in Faransiis asalka ah oo geomatics waa turjumaad English ah) markii ugu horeysay lagu isticmaalay warqad cilmi ah in 1975 by Bernard Dubuisson, oo ah Faransiis Faransiis iyo sawirqaade (Gagnon iyo Coleman, 1990). Waxaa la diiwaangeliyey in ereyga ay aqbaleen Guddiga Caalamiga ah ee Faransiiska Faransiiska ee 1977 sida neolinta. Sidaa darteed, ma aha oo kaliya waxay ka jirtaa 1975, laakiin sidoo kale waxay leedahay macne! In kasta oo aan si cad u qeexin Dubuisson, macnaha waxaa lagu sharaxay buugiisa oo la xidhiidha goobta juqraafi ah iyo xisaabinta.
Waqtigaas wakhtigu ma uusan helin aqbalaadda la filayo. Ma ahayn ilaa Michel Paradis, oo ahaa xog-haye ka Quebec, wuxuu soo qaaday ereyga, oo bilaabay in loo isticmaalo si aad u ballaaran. Jaamacadda Laval ayaa ereyga u adeegsatay akadeemiyadda 1986 iyadoo la hirgelinayo barnaamij shahaadadeed oo ku yaal Geomatics (Gagnon iyo Coleman, 1990). Laga soo bilaabo Quebec waxaa loo kordhiyay Jaamacada New Brunswick, ka dibna Kanada oo idil. Dabeecadda laba luqoodka ah ee Kanada waxay ahayd arrin muhiim u ah korsashada iyo sii kordhinta waddankan.
Tani waa sida ay la yaab u tahay in xubnihii hore ee shaqooyinka topographic, markii ereyga "Geomatics" lagu soo bandhigay Britain, waxay ku dooday in la qaadan karo oo la qeexi karo si kuwa doorta ay ula jaan qaadaan baahiyahooda. Sababaha loo bixiyay baahida isbedelka waxay ahaayeen, ugu horeyntii, in la wanaajiyo muuqaalka topography iyadoo laga dhigayo mid aad u casri badan, oo leh suuq weyn iyo qaadashada tikniyoolajiyadda cusub ee horumarka. Midda labaad (oo ay suuragal tahay, dhab ahaantii, waxa ugu muhiimsan) in la wanaajiyo soo jiidashada xirfadda ee musharraxiinta mustaqbalka ee barnaamijyada sahaminta jaamacadda.
Maxaa isbeddelay mar labaad?
Dib-u-eegis, waxay umuuqataa inay ahayd saadaalin rajo leh. Barnaamijyada sahaminta ee jaamacadda waxaa guud ahaan ka qaatay dugsiyada injineerinka. Ardayda, marka si ahaan loogu hadlo, waxay sii wadeen hoos udhaca, ama uguyaraan sidii oo kale, oo xirfadda guud umay qaadin ereyga inay ku daraan cinwaanada wax qabad mana aha in loogu yeero "geomatik." Mana muuqato in dadweynuhu ogyihiin waxa loola jeedo 'Geomatics'. Adeegsiga ereyga '' joomatik 'erayga bedelka ereyga' topography ', gaar ahaan joodariska dhulka, ayaa umuuqda inuu ku fashilmay tirinta dhan. Intaa waxaa sii dheer, caddeynta ayaa soo jeedineysa in RGB GPGB aaney hadda ku qanacsaneynin in joomatari ahaan ay tahay eray la doonayo in lagu sii wado cinwaanka.
Baadhitaanka uu ku sameeyay qoraaga 2014, iyo xaqiiqda ah in GPGB ay u aragtay inay ku habboon tahay in kor loo qaado arrinta, waxay muujineysaa inay jiraan ugu yaraan qanacsanaan ku saabsan adeegsiga ereyga 'joomatics' sida soo-saareyaasha ... wax. Maaha xirfaddan, runtii, maadaama ay wali u muuqato in si ballaaran loo aqbalay "topography" ama "topography to." Kani ma'aha run oo keliya gudaha Boqortooyada Ingiriiska, laakiin sidoo kale waa run Australia iyo xitaa Kanada, halkaas oo ereyga noloshiisu ka bilaabatay. Australia gudaheeda, erayga 'joomatik' guud ahaan wuxuu ku dhacay adeegsiga waxaana lagu bedelay "saynis-haweed", kaas oo laftiisa lumiyey ka soo horjeedda erey cusub oo dhowaan iyo horusocod leh sida "sayniska geospatial."
Gobollo badan oo Kanadiyaanka ah, erayga '' geomatic '' wuxuu xiriir la leeyahay injineernimada, taasoo soo jeedineysa in qaab-dhismeedka sawir-qaade uu u noqon karo laan kale oo edbintaas ah. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay Jaamacadda New Brunswick, halkaas oo "Geomatics Engineering" ay garab taagan tahay laamo kale oo injineeriyad, sida madaniga iyo farsamada.
Maxaa beddeli kara ereyga "geomatics"?
Sidaas darteed, haddii ereyga "geomatics" uu ka dhigo taageerayaashiisa aan ku faraxsanayn, goorma ayuu bedeli karaa? Mid ka mid ah qodobada caadiga ah ee aan la aqbali karin waa lumista tixraaca shaxanka. Haddaad karti u leedahay injineerada yurubiyamka, miyaad ku yeelan kartaa sahamiyeyaal geeyey? Malaha maya, waxaan soo jeedin lahaa. Taasi waxay u horseedi kartaa wareer badan.
Marka la eego baahida sii kordheysa iyo awoodda lagu qeexo si sax ah meesha ama booska wax walba, labadaba qaab buuxa iyo qaab qaraabo ah, ereyga "bannaan" ayaa markiiba maskaxda ku soo dhaca. Taasi waa, booska ama meesha bannaan. Haddii booskaas boosku yahay, markaa, marka loo eego qaabdhismeedka meeraha, waxay raacaysaa in juquraafi ahaan noqdo xulasho dabiici ah. Maaddaama aqoonta saxda ah ee laxiriirta goobta ay tahay udub dhexaadka u lahaanshaha sahaminta dhulka, kordhinta awooda aalado badan oo leh saxsanaan kaladuwan si loo bixiyo xog booska, iyo sidoo kale horumarka joogtada ah ee codsiyada Aqoonta noocaas ah ayaa la dabaqi karaa, xirfadda ayaa ku kortay muhiimadda - xirfadda taasi waa midda Sahammada Geospatial.
In kasta oo "joornaalka dhulka" uu leeyahay taariikh dheer oo kibir badan, tixraaca dhulku wuxuu u badan yahay inuu ka badbaaday waxtarkiisa iyo muhiimadiisa. Xirfadlaha sahaminta casriga ah wuxuu hadda u oggolaanayaa inuu adeegsado labadiisa qalab, iyo sidoo kale khibradiisa iyo fahamkiisa saxda, iyo sidoo kale saxnaanta qaraabada ah ee cabbiraadaha laga helo ilo kala duwan illaa meela ballaaran oo dalacsiis ah, ka fog wixii ka dambeeya aagagga dhaqanka ee 'topography iyo sawir-gacmeedka'. Tani hadda waxay u baahan tahay in la aqoonsado laakiin sii wadidda xiriirka ay la leedahay xirfad-dhaqameedka. Marka loo baahdo soo saareha shahaado si looga garto milkiilaha hore ee dhulalka iyo howlaha kale ee badan ee u adeegsada joornaalada joornaalka magacyadooda, sahamiyaha geospatial waa ereyga qancinaya baahidaas.
Booth, Stephen (2011). Waxaan helnay xariirka maqan laakiin ma aanan cidna u sheegin! Geomatics World, 19, 5
Dubuisson, Bernard. (1975). Ku tababar xirfadaha macaamiisha sawir qaadayaasha iyo Moyens Cartography waxaad ka geddisan kartaa Des Ordinateurs. (KJ Dennison, Trans.). Paris: Editions Eyrolles.
Johnston, Gordon. (2016). Magacyada, caadooyinka iyo kartida. Geomatics World, 25, 1.
Gagnon, Pierre & Coleman, David J. (1990). Geomatics: hab isku dhafan oo nidaamsan si loo daboolo baahiyaha xogta qallafsan. Machadka Cilmi-baadhista iyo Mapping ee Canada, 44 (4), 6.
Maynard, Jon. (1998). Geomatics-codkaaga waa la tixgeliyey. Surveying World, 6, 1.
Qaybta asalka ah ee maqaalkani waxaa lagu daabacay Geomatics World November / December 2017
Post Previous«Previous Khibradeyda aan isticmaalayo Google Earth ee Cadastre
Post Next Khariidado u samee oo qorshee jidka u isticmaal BBBikeNext »
Hal Jawaab: "Ma inaan bedelno ereyga" Geomatics "?"
Maqaal fiican, waxaan ka soo bixi karnaa gabagabeyn ku saabsan saameynta teknoolojiyada cusub ee isbeddelka ku saabsan mabaadi'da sida waagii hore oo isdaba-joog ah: Juqraafi, farshaxanka iyo kartoonka.
Waxyaabaha muhiimka ah ee tani waa in la hubiyo in ereyada la ansixiyay sida runta ah, ay sii socdaan wakhtigooda, taas oo ugu dambeyntii muujinaysa sifooyinka ganacsiga ama xirfada qeexaya.
Aniga ahaan, geomantic marwalba wuxuu ahaa mid cajiib ah oo cake ah, laakiin dhamaadka waxaa jira erayo soo socda oo tagaya sida fashion oo aan waqti dambe ku dhicin. Waxaan ku tiirsanahay cilmibaaris casri ah ama juqraafi.